Izinto ezisetshenziswayo ukwenza izicathulo | Bezzia
Izicathulo Eziluthayo | | Izicathulo
Ukubeka eceleni imfashini yesikhashana, i izinto ezikhethiwe ngomklamo wezicathulo zihlobene nohlobo lwezicathulo. Kunamabhuzu aqinile adinga isikhumba ukumelana nokushaywa kweziqu kanye nezicathulo ezincane, ezipholile zendwangu, ezilungele ukuhamba ogwini.
Yize kunezitayela zemfashini ezibheja ezintweni ezithile ezithile, kukhona okudala okukhona njengamanje futhi okuyikho okukhethwe abakhiqizi bezicathulo.
Isikhumba mhlawumbe i-protagonist enkulu ngoba yize iyinto ebizayo kodwa futhi iyasebenza kakhulu. Kumelana nabanye abambalwa, kukhululekile futhi kuhlala isikhathi eside. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zesikhumba, yize zonke zenziwe ngesikhumba sesilwane. Singathola izicathulo zesikhumba ezibushelelezi ezithambile kakhulu ngoba nazo zimbozwe nge-lacquer ekhethekile futhi nesikhumba sendwangu esibukeka njenge-suede sibonga isiphetho esithile. Ngokuya ngohlobo lwesikhumba, isiphetho, nomsebenzi ohilelekile ekuqedeni isicathulo, inani elizobiza ngalo. Ngokuvamile ziyabiza kepha uma sicabanga ngakho lezi zicathulo zihlala iminyaka ukuze zingabizi ngokuhamba kwesikhathi.
Enye into esetshenziswa kabanzi yile izikrini, ezinenzuzo yamaphethini wazo futhi ngaleyo ndlela zibe isikhungo sokuheha. Zisetshenziswa kabanzi ezicathulweni zasentwasahlobo nasehlobo, isikhathi esigcwele amamodeli anezimbali nemiklamo ejabule. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zendwangu futhi ngokuya ngenhloso yomkhiqizi noma umklami, kuzokhethwa efanelekayo. I-Canvas ingenye esetshenziswe kakhulu ngenxa yokumelana kwayo yize ingaba nzima ngandlela thize ngokuya ngomklamo wezicathulo. Ukotini noma i-satin isetshenziselwa ukuhlobisa noma izicathulo zomugqa nezindwangu ze-polar zangaphakathi zezicathulo zasebusika.
I-Los Izinto zokwenziwa zishibhile ngakho-ke zisetshenziselwa kabanzi ukwenza izicathulo ngokulandelana. Izicathulo ezishibhile ngokuvamile ziyenziwa futhi ipulasitiki isetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene (i-ethylene-vinyl acetate, i-liquid silicone, i-polyurethane foam, njll.) Ezibekwa ochungechungeni lwezinqubo ukuthola isiphetho esihle. Futhi kungokokukhethwa kwezicathulo zezemidlalo, yize namuhla izicathulo eziningi zinezinto ezithile zokwenziwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Izicathulo » Izinto zokwakha ezisetshenziselwa ukwenza izicathulo
I-estefi ERROTE kusho
kahle siwey cha mms
Umehluko phakathi kwe-manicure yaseFrance ne-manicure yaseMelika
Thanda ngokobuntu bakho